sexting - ဆယ်ကျော်သက်အကြားအန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်
sexting - အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြောင်းသစ် | လိင် & ဉာဏ်အလင်း
နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ် - sexting လျှော့မတွက်ပါ!
အဆိုပါအသုံးအနှုန်း sexting စကားမြားကိုလိင်နှင့်စာသား၏ထ လုပ်. Whatsapp သို့မဟုတ် Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုကွန်ယက်များကနေတဆင့်ခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာ၏ဖြန့်ဝေတို့ပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ sexting ၏ကျယ်ပြန့်အသိတစျခုတှငျလညျး post မျှဝေမေးခွန်းထုတ်စရာ pose အတွက်ဓါတ်ပုံအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများမှ။
အွန်လိုင်းလမ်းကြောင်းသစ် sexting - က virtual striptease
ကွာခဏမိတ်ဆွေများကိုဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောတူညီချက်မပါဘဲပံ့ပိုးပေးသဖြင့်အသုံးပြုကြသည်ပေးသောညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရုပ်ပုံများကိုရည်ရွယ် Land မဟုတ်ပါဘူး။
အဘယ်ကြောင့် sexting လူငယ်များနှင့်အတူအစဉ်အဆက်ဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်သနည်း
အထူးသဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဆယ်ကျော်သက်သည်အခြားရွယ်တူဖို့တစ်ခုခုသက်သေပြချင်မှလေ့ရှိပါတယ်။ မကြာခဏခေါ်ဆောင်သွား contents တွေကိုထို့နောက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရာတင်ဆက်ဖို့နှင့်မိတ်ဆွေများအကြားဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဝင်ငွေမှစလှေတျတျောနေကြသည်။
လူငယ်များကဒီလမ်းအတွက်၎င်းတို့၏ Self-လေးစားမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အရှင် sexting ကနေပုံအကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာပေးပို့ခြင်းအဓိကအားဖြင့်မိတ်ဖက်သူ့မေတ္တာကိုပြသရန်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထဖန်တီးဖို့ဆက်ဆံရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်လူငယ်များဤ၌တည်ရှိ၏ကတည်းကဟုတ်ပါတယ်, sexting, အသုံးပြုသူများအတွက်အချို့အလားအလာရှိသည်ပါဘူး။ ဆက်ဆံရေးရှည်လျားလွန်းလူသိများဒီအသက်အရွယ်အတွက်ကိုင်ကြဘူးထို့ကြောင့်ဖိအားအောက်မှာအခြားလူတစ်ဦးကိုတင်မယ့်ပါတီကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, ဓါတ်ပုံများ၏ထုတ်ဝေရန်မကြာခဏအများအားဖြင့် Facebook နှင့် Twitter ကဲ့သို့အလူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင်ခြိမ်းခြောက်နေသည်။
နိဂုံး - စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအကြောင်းတစ်ခုခုထုတ်ဖော်ပြသဒါက!
ဒါပေမယ့်ပင်သတိလစ် Whatsapp မက်ဆေ့ခ်ျကိုတော်တော်များများကလူနဲ့တန်းတူဥပမာအမှားကစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်အခါ contents တွေကိုပေးပို့ခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တတိယပါတီများ၏ရင်းနှီးသောဓါတ်ပုံတွေကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့ကသူ၏ပြခန်းဖေါ်ပြခြင်းနေချိန်မှာသင်ရှက်စရာအခွအေနသို့ရနိုငျဒါဓာတ်ပုံများမကြာခဏအလိုအလြောကျသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နေကြသည်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
SHIPPER ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသောအကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ခြင်းမပြုမီသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဒါဟာနှစ်ကြိမ်, နောက်ထပ်ဖုန်း setting များကိုအာရုံစိုက်စစ်ဆေးပေးရန်လက်ခံလိုင်း သာ. ကောင်း၏။
Facebook အဖို့ပုံရိပ်တွေကိုအပ်လုတ်အခါ, ဥပမာအားဖြင့်ပရိသတ်ကိုတိကျစွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အဆိုပါရင်းနှီးပုံရိပ်တွေကိုလည်းမျက်နှာသို့မဟုတ်အထူး features တွေမပြသင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကလူနာအဖြစ်ဖြန့်ချိမှာပျက်စီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တဦးတည်း sexting အကြောင်းကိုဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများကိုအားလက်ခံတွေ့ဆုံလျှင်သင်တို့သည်ချက်ချင်းဖြစ်နိုင်သည်ပစ္စုပ္ပန်အယူခံဝင်ပေမယ့်ဓာတ်ပုံကိုဖျက်ပစ်သင့်ပါတယ်။
ဤသည်အတိုင်းအရှည်လုံခြုံဘက်မှာအရှင်ကျိန်းသေ (ကလေးက) အပိုင်ထဲမှာမရှိတော့ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, မိတ်ဆွေများထံမှတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများကစမတ်ဖုန်းများ၏အလွဲသုံးစားမှု၏အမှု၌မတော်တဆဖြန့်ချိမှုအန္တရာယ်ကိုဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
sexting မလိုချင်တဲ့ပြန့်ပွားများ၏အန္တရာယ်သိသိသာသာတိုးပွါးအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, များလွန်းလူငယ်များအားဖြင့်မဆငျမခွအသုံးပြုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျဖိအားအောက်မှာအဆွေခင်ပွန်းကိုအလွယ်တကူ set ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူ၏ရွယ်တူချင်းဖိအားရင်းနှီးသောဓါတ်ပုံကနေပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲပေါ်လာဖို့လိုလားနှင့်အရှင်စကားလုံးများ၏ truest သဘောအရလူသန်းပေါင်းများစွာများ၏ရှေ့မှောက်၌အဝတ်အချည်းစည်းရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ကအနည်းဆုံး sexting ၏အန်တရာယျစဉ်းစားရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအစီအမံယူရန်အရေးကြီးပါသည်။ တဦးတည်းကအမြဲသင်အလိုအလြောကျကြောင့်လက်ခံသူများအဖြစ်အားလုံးအဆက်အသွယ်ဖုန်း setting များကိုမှမတော်တဆပို့ဆောင်ကြဘူးလျှင်သင်အမှန်တကယ်ဓါတ်ပုံများပေးပို့နှင့်အတူအဘယ်သူအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တစ်ဦးမှတ်မိစေတော်မမူကြောင်းခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာပေးပို့ခြင်းနှင့်မျက်နှာကိုမျှမကအခြားပုံမှန် features တွေမဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုခဲ့သည်။
အဆုံးမှာတော့အမြဲတမ်းခြိမ်းခြောက်မှုတဦးတည်းကအနည်းဆုံး, ဒီလူငယ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏လိုအပ်ချက်မေးခွန်းထုတ်သင့်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သော, ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။